GNOME 3.38.4 inouya nekuvandudza muWayland, Mutter uye GNOME Shell | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe ndichifanira kubvuma kuti ini ndiri kunyanya kufarira kune dzimwe nhau senge Plasma 5.21 kuburitswa weChipiri uno, ndinoziva kuti kune vazhinji vashandisi vanosarudza imwe graphical nharaunda. Kunyanya, iyo inonyanya kuzivikanwa nekuve iyo desktop inoshandiswa neyakanyanya vhezheni yezvakakurumbira zvekuparadzirwa kweLinux, senge Fedora uye Ubuntu. Nhau dzanhasi ndedzekuti, mushure me yechitatu poindi vhezheni uye vhiki nhatu shure kwayo, inowanikwa GNOME 3.38.4.
GNOME 40 ichave irikunze mukati memwedzi, asi iyo vhezheni yemifananidzo yakajeka haisi kuzouya kuUbuntu 21.04 Hirsute Hippo, saka vashandisi veCanonical's system vanofara kuti izvozvi desktop desktop inoramba ichikwenenzverwa. Ichauya kuna Fedora, avo vakafunga kuti GTK 4.0 neGNOME 40 zvakanaka uye zvinogona kushandiswa mune inotevera vhezheni yavo yekushandisa system. Pazasi iwe une iyo rondedzero yezvakakurumbira zvitsva ayo asvika neGNOME 3.38.4.
Pfungwa dzeGNOME 3.38.4
HiDPI tsigiro muWayland yakagadziridzwa kune iyo Yevhe gwaro muoni.
Kunatsiridza muFlatpak vhezheni yeGNOME Mabhokisi.
Kuwanika kune yekugamuchira skrini muGNOME Shell yakagadziridzwa.
GNOME Shell yakagamuchira gadziridzo dzinoverengeka kugadzirisa iyo nyaya iyo yakaita kuti gridhi reapp rinonyangarika.
Iko kugona kutora mifananidzo mune yakazara skrini windows isina kuendeswazve muX11 yakagadziridzwa.
Yakagadziridzwa kuchengetedza kweVPN zvakavanzika.
Matinji akati wandei akaunzwa mabugs akaonekwa mune dzimwe shanduko.
Mutter ikozvino inogona kumisikidza Xrandr seyekutanga kuburitsa kweXWayland.
CRTCs dzakaremara kana pasina chekutarisa chakabatanidzwa.
Yakagadziriswa tsaona dzakasiyana siyana uye kusatarisirwa kusingafadzi.
Sezvazvakaita nekuburitswa kwakawanda kweLinux, nekuda kwekuti iyo GNOME 3.38.4 kuburitswa ndeyepamutemo hazvireve kuti ichaonekwa seyakagadziriswa izvozvi. Chii chiripo kodhi (pano izvo zvemapakeji zvakasiyana), asi izvozvi zvave migove iyo inofanirwa kuiwedzera kumasisitimu avo ekushandisa.
Iyo inotevera vhezheni ichave iri GNOME 3.38.5 uye ichasvika mukati Kurume, nguva pfupi isati yatanga GNOME 40 iyo inosvika musi wa24 wemwedzi mumwe chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GNOME 3.38.4 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweWayland, Mutter uye GNOME Shell
Ndanga ndichipenga nekutenderera nehunhu mazuva ano ekupedzisira uye muneese kugoverwa kwandakaona kuti pandinovhura tray yekushandisa, inoratidza maapplication uyezve inoita iyo animation uye haina kuona chero chinhu chinoyerera.
Ndinovimba kuti neshanduro iyi izvo hazvichaitika
Debian 11 yakabuda, nezuro Nyamavhuvhu 14, 2021, uye mashandiro anounzwa neshanduro iyi andishamisa, hazvishamise, zvinhu zvese zvinonzwa kuwedzera mvura, wayland iri kusimukira, ndinovimba kuti mune ramangwana zvese zvinoshandiswa zvinogona kushandiswa mu way native munharaunda yewayland, pasina kunyatso kushandisa xwayland kuvatanga.